Momba anay | Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd.
Ny DTS dia miorina ao Shina, ny nodimbiasany dia natsangana tamin'ny taona 2001. DTS dia iray amin'ireo mpamatsy fitaomana lehibe indrindra ho an'ny indostrian'ny mpamokatra fanalevahana sakafo sy zava-pisotro any Azia.
Tamin'ny taona 2010, nanova ny anarany hoe DTS ilay orinasa. Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 1.7 tapitrisa metatra toradroa ary, ny foibe dia ao Zhucheng, faritanin'i Shandong, manana mpiasa 160 izy. DTS dia orinasa teknolojia avo lenta manambatra famatsiana akora, vokatra R&D, famolavolana sy famokarana ary famokarana, fizahana vokatra vita, fitaterana injeniera ary serivisy aorian'ny fivarotana.
Ny orinasa dia manana CE, EAC, ASME, DOSH, MAMA, KEA, SABER, CRN, CSA ary fanamarinana matihanina iraisam-pirenena hafa. Ny vokatra dia amidy amina firenena sy faritra maherin'ny 35, ary ny DTS dia manana maso sy birao fivarotana any Indonezia, Malezia, Saodita, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria sns .. Miaraka amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy aorinan'ny varotra lafatra. , Nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa ny DTS ary mitazona fifandraisana marim-pototra amin'ny famatsiana sy ny fangatahana amina marika malaza 130 mahery eto an-toerana sy any ivelany.
Famolavolana sy fanamboarana
Mba hahatongavana ho marika lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fanamafisam-peo momba ny sakafo sy ny zava-pisotro dia tanjon'ny olona DTS, manana injeniera mekanika za-draharaha sy mahay izahay, injenieran'ny famolavolana ary injenieran'ny fampandrosoana lozisialy elektrika, tanjonay sy adidinay ny manome ny mpanjifanay ny vokatra tsara indrindra , serivisy sy tontolon'ny asa. Tianay ny zavatra ataonay, ary fantatray fa ny lanjanay dia miankina amin'ny fanampiana ireo mpanjifantsika hamorona lanja. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samy hafa dia manohy manavao hatrany izahay, mamolavola ary mamorona vahaolana namboarina ho an'ny mpanjifa.
Manana ekipa matihanina atosiky ny finoana iraisana izahay ary mianatra sy manavao hatrany. Ny ekipanay manan-karena voangony traikefa, mitandrina fiasa miasa ary tena tsara fanahy mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa maro, ary koa izany dia ny vokatry ny mpitarika izay afaka mahatakatra, maminavina, mitondra ny fangatahana tsena miaraka amin'ny drafitra ary hiara-miasa amin'ny ekipa hitarika amin'ny fanavaozana.
DTS dia manolo-tena hanome mpanjifa fitaovana tsara kalitao indrindra, fantatray fa raha tsy misy ny fanohanana ara-teknika tsara, na ny olana madinidinika aza dia mety hahatonga ny tsipika famokarana mandeha ho azy tsy hiasa intsony. Noho izany, afaka mamaly haingana sy mamaha olana izahay rehefa manome serivisy mialoha, varotra ary serivisy aorian'ny varotra ny mpanjifa. Izany koa no antony ahazoan'ny DTS hibodo ny tsena lehibe indrindra any Shina ary hitombo hatrany.
Azafady mba aza misalasala mandefa anay ny zavatra takinao ary hamaly anao izahay.
Nahazo vondrona injeniera matihanina izahay hanomezana izay ilainay amin'ny antsipiriany rehetra.
Ny santionany tsy andoavam-bola dia azo alefa ho anao manokana hahafantatra bebe kokoa ny fampahalalana bebe kokoa.
Azonao atao ny mandefa mailaka aminay ary mifandray aminay mivantana.
Ankoatr'izay, dia raisinay ny fitsidihana ny orinasanay erak'izao tontolo izao mba hahafantarana tsara kokoa ny fikambananay.
Manaraka ny mpanjifa faha-1, ny kalitao voalohany ambony, ny fanatsarana tsy tapaka, ny tombony iraisana ary ny foto-kevitra mandresy. Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay dia manome ny mpiantsena serivisy avo lenta ho an'ny mpiantsena.